Bishnu Sharma: ओस्करले सिकाएका पाठहरू
बधाइ छ, फ्रेन्च सिनेमा ‘द आर्टिस्ट’लाई जसले एकेडेमी अवार्ड (ओस्कर)को ८४ औं संस्करण जितेको छ । ‘द आर्टिस्ट’ले उत्कृष्ट सिनेमा, अभिनेता, निर्देशकसहित पाँच विधामा ओस्कर जित्यो । संवादरहित यो सिनेमा थ्रीडी र एनिमेसनको जमानामा आएको ब्ल्याक एन्ड ह्वाइट फिल्म हो । सन् बीसको दशकको अन्त्यतिरको समयमा हलिउडका साइलेन्ट फिल्म (मुक फिल्म)मा काम गरेका दुई कलाकारको कथात्मक यो सिनेमा त्यही बेलाको शैलीमा निर्मित छ । मुक फिल्ममा निकै चलेका हिरोलाई फिल्ममा आवाज आएपछि हुने समस्यालाई फिल्मको कथानक तुल्याइएको छ । अन्ततः प्रक्षेपण नै सहि, ‘द आर्टिस्ट’ले ‘द डेसेन्डान्ट्स’, ‘ह्युगो’, ‘द हेल्प’, ‘मिडनाइट इन पेरिस’, ‘एक्सट्रिमली लाउड एन्ड इन्क्रेडिबल्ली क्लोज’, ‘मनिबल’, ‘ट्री अफ लाइफ’ र ‘वार हर्स’लाई माथ दियो ।
‘द आर्टिस्ट’को जित र एकेडेमी अवार्डको पछिल्लो संस्करणले पहिचान एवम मानकका लागि संघर्षरत नेपालजस्ता अल्पविकसित मुलुकका चलचित्रका लागि गतिलो पाठ सिकाएको छ । ओस्कारको ताजा नतिजाले सिनेमालाई बौद्धिक सम्पत्तिको रुपमा नभई प्रोडक्टको रुपमा हेर्ने हलिउडको ग्लोकोलाइजेसन प्रवृत्तिमाथि प्रहार गरिदिएको छ । अर्कोतिर, सिनेमालाई सांस्कृतिक र व्यावसायिक दुवै रुपमा ग्रहण गर्ने फ्रान्ससहितका सिनेमाहरूको एउटा समूह (जो हलिउडको समानान्तररुपमा आफूलाई उभ्याउन चाहन्छ)लाई ओस्करको पटाक्षेपले राहत पुगेको छ । तर, हामी यहाँ सोमबारको ओस्कारबाट उद्योगको मान्यता नपाइसकेको नेपाली चलचित्रले के–के पाठ सिक्न सक्छ भन्ने कुरा चर्चा गर्दछौं । जुन, कुरालाई नेपाली सिनेमाले स्वीकार्नुको विकल्प छैन ।
सिनेमा दृश्यविधा हो
उत्कृष्ट फिल्मसहित पाँच ओस्कर जितेको ‘द आर्टिस्ट’ मौन (साइलेन्ट) सिनेमा हो जसलाई हेर्न आँखा भएमात्र पुग्छ, सुन्नलाई कान चाहिँदैन । रेडियो नाटकजस्ता सिनेमा बनाउने नेपाली सिनेमाका कथित सर्जकहरूले यो सिनेम्याट्रिक ल्यांग्वेजलाई आत्मसात गर्नुपर्छ । ‘द आर्टिस्ट’ले सुरुदेखि अन्त्यसम्म द्वन्द्व र संयोजनलाई यसरी प्रस्तुत गरेको छ कि साइलेन्ट सिनेमा हेर्नेलाई पनि त्यसले बाँधिराख्छ । फ्रेन्च सिनेमाको यो इन्गेजमेन्ट हाम्रा लागि अनुकरणीय छ । नेपाली ब्लकबस्टर ‘लुट’मा संवादको हिस्सा ज्यादा भएपनि त्यसमा दृश्यका विधाका विशेषतालाई अनुकरण गरिएको थियो । ‘द आर्टिस्ट’बाट हाम्रा सिनेमाले फिल्म श्रव्य विधा होइन दृश्य विधा हो बुझ्नुपर्छ ।
रङ होइन संवेदना चाहिन्छ
हलिउड र बलिउडमात्र होइन नेपाली सिनेमा रङलाई लिएर चम्किला लाग्छन् । बलिउड त यसैपनि कस्मेटिकमा विश्वास गर्ने प्रवृत्ति हो । हलिउड सिनेमाहरू दरबारमार्गका पसलमा चम्कने लाइट इफेक्ट जस्तै हुन् । नेपाली फिल्मभित्र रङको यति भद्दा प्रयोग गरिएको हुन्छ कि घरका भित्ता, पर्खाल, खम्बा र अनुहारमा रङ पोतेर कृत्रिम बनाइएको हुन्छ । जति गाढा रङ, उति दर्शकलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ भन्ने भ्रमको मनोविज्ञान नेपाली निर्देशकमा छ । तर, ‘द आर्टिस्ट’ विशुद्ध श्याम श्वेत सिनेमा हो । यदि ब्ल्याक एन्ड ह्वाइट फिल्ममा रगत बगिरहेको दृश्य छ भने रगत रातो हुन्छ भन्ने अब्जेक्टिभ मनोविज्ञान दर्शकमा आउनुहुँदैन, बरु त्यससँग उनीहरूको संवेदना साटिनुपर्छ । सिनेमामा रङ होइन, क्राफ्ट नै ठूलो कुरा हो । रङले होइन इमोसनले दर्शक तान्नुपर्छ । भिजुअलको सौन्दर्य रङमा होइन, संवेदना सम्प्रेषणमा हुनुपर्छ ।
राजनीतिलाई जोड्ने माध्यम
यसपटकको ओस्कारमा उत्कृष्ट विदेशी भाषाको फिल्म ‘अ सेपरेसन’ (इरान)लाई लिएक कृटनीतिक वृत्तमा समेत चासो देखिएको छ । खासगरि, अमेरिकी कुटनीतिज्ञहरूले चासो सतहमै देखाएका छन् । आणविक तनावले अमेरिका र इरानको सम्बन्ध निकै चिसिएको बेला इरानी फिल्मले अमेरिकाबाट ठूलो पुरस्कार पाउनु संयोगमात्र होइन । अमेरिकासहित युरोपेली मुलुकले यतिबेला इरानी तेल निर्यातमा इम्बार्गो (तेल नकिन्ने) घोषणा गरिसकेका छन् । दुई मुलुकबीच फाटेको मन सिनेमाको सियोले बुन्न काम भैरहेको छ । हाम्रा नेपाली सिनेमाले पनि राजनीतिक अस्थिरता, द्वन्द्व र निराशाले फाटेको नेपाली जनताको मनलाई जोड्ने खालका सिनेमा बनाउनुपर्छ । बलिउड सिनेमा ‘डर्टी पिक्चर’ हेरेर इन्टरटेनमेन्ट, इन्टरनेटमेन्ट र इन्टरनेटमेन्ट भन्दै कराएर अब सिनेमा उकासिने छैन ।
प्रविधि र पैसा होइन सृजनशिलता
‘द आर्टिस्ट’ र ‘अ सेपरेसन’ले स्पष्ट सन्देश दिएका छन् –सिनेमा कम्प्युटरबाट होइन मनबाट बन्नुपर्छ । पैसा र प्रविधि सिनेमा निर्माणमा समग्रता होइनन् । फ्रान्स र इरानले निकै कम मूल्यमा सार्थक र यथार्थवादी सिनेमा बनाएर विश्वको मन जितेका छन् । दुवै सिनेमाको लागत पनि कम हो जसरी ठीक विपरित, हलिउड सिनेमामा इराक, अफगानिस्तान र भियतनाम युद्धमा जसरी पैसाको खोलो बगाइन्छ । दुवै सिनेमाले पैसा र प्रविधिको प्रचुरता बिनै सृजनशिल्पको भरमग्दुर प्रयोग गरेका छन् । नेपाली सिनेमा पनि पैसा र प्रविधिको पछाडि होइन, आफ्नै स्रोत साधनले पुग्नेरुपमा सिर्जशिलतमा अघि बढ्नुपर्छ । सिर्जना हाम्रा सिनेमाको ठूलो अभाव हो । नयाँ उखान छ –बाँदरको हातमा आइफोन । प्रविधि र पैसा छ तर बुद्धि छैन भने के गर्ने ?
ट्रेन्ड : रियालिटी सिनेमाको
सँधैजस्तो ओस्करले खेपिरहेको आरोप के हो भने व्यापारमा भाग्य चम्काइसकेका फिल्मलाई यसले गतिलो किन मान्दैन ? फिल्मको ब्यापारसँग अवार्डको गोरु बेचेको साइनो सम्म नभएपनि अवार्ड पाउनुअघि दर्शकको नजरमा नपरेका फिल्मले त्यसपछि भने राम्रो ब्यापार गरेका उदाहरण प्रशस्तै छन् । किनभने ओस्कार निर्णय कमर्सिएलभन्दा पनि रियल सिनेमाबाट प्रभावित भैरहेको छ । पछिल्ला वर्षका एकेडेमी अवार्डका निर्णयलाई मूल्यांकन गर्दा ब्यावसायिकभन्दा रियालिटी सिनेमाहरू धमाधम अवार्ड जितिरहेका छन् । नेपाली सिनेमाले आफ्नो पहिचान स्थापित गर्ने हो भने हलिउड र बलिउडबाट कपि, ट्रान्सेलसन र ट्रान्सक्रिप्ट होइन मौलिक कथामा रियालिस्टिक सिनेमाहरू बनाउनुपर्छ ।
Posted by Sharma Bishnu at 8:39 PM